Ungayisusa njani i-Pin kwiAkhawunti yam yePinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndiyisusa njani ipini kwiakhawunti yePinterest?
IPinterest yinethiwekhi yentlalontle eneqonga elibonakalayo, oku kuthetha ukuba abasebenzisi bayo babe nethuba lokuposa iifoto kwaye sabelane nabo ngohlobo lweebhodi, abaya kuzenza ngokwabo ngokokuthanda kwabo nokukhetha kwabo. Olu papasho lunokufakwa kwiphepha lewebhu okanye kolunye usetyenziso.
Ngoku kwenzeka ntoni xa awusafuni pini ethileYile ndlela ekubizwa ngayo oku kupapashwa kwesi sicelo ngokuthe ngqo, bayaqhubeka ukuba ngaphakathi kweebhodi esizimisele zona, kuba sizisusile, isicelo sinomsebenzi omiselwe oku. Emva koko, siza kuchaza indlela yokwenza.
Ungasusa njani izikhonkwane kwisicelo sefowuni esiphathwayo:
Eyokuqala icacile faka isicelo, njengesiqhelo ukwenza oko.
Nje ukuba ufake isicelo kuya kufuneka ufumane kwaye ukhethe i icon leyo iyahambelana ne-silhouette, ngulo uya kukunika ukufikelela kukhetho lomsebenzisi lweakhawunti yakho.
Oku kuyakubonisa enye indlela ye khetha ibhodi apho ipini ofuna ukuyicima ikhoyo.
Kanye Khetha upapasho ufuna ukucima kuya kufuneka ucofe kuyo kude kube inkqubo ibonisa uluhlu lwezinye iindlela.
Nje ukuba inkqubo ikusebenzise ezinye iindlela kuya kufuneka uzikhangele kwaye ukhethe ezo zihambelana nohlelo. Oku kuboniswe yi icon ebhekisa kwipensile, khetha ukhetho lokuhlela.
Ekugqibeleni, Cinezela ukucima enye.
Ngeli xesha inkqubo yezizathu zokhuseleko iya kukucela ukuba uqinisekise isicelo sokususa, Cinezela enye indlela yokucima kwakhona.
Ungasusa njani izikhonkwane kwisicelo seekhompyuter:
Kule meko, kuya kufuneka ufake iphepha lePinterest ukusuka kuhlobo lwesicelo sewebhu. Ye ngendlela eqhelekileyo njengesiqhelo wenza, kunjalo.
Nje ukuba ufake isicelo kuya kufuneka khangela kwaye ukhethe i icon ehambelana nentambo, le yeyona iya kuququzelela ukungena kukhetho lomsebenzisi lweakhawunti yakho.
Oku kuya kukunika ithuba lokukhetha khetha ibhodi apho ipini ofuna ukuyicima ikhoyo.
Ngoncedo lwempuku yakho, Khetha i-pin ofuna ukuyicima, emva kokukhetha uklikhe kuyo.
Eli nyathelo liza kubonisa uthotho lweendlela ezizezinye phezulu umfanekiso okhethiweyo.
Kuya kufuneka ukhethe kwaye ukhethe i icon yokuhlela, oku kubonakala kwinkqubo ekubume bepensile, cofa kuyo.
Nje ukuba ukhethe olu khetho Inkqubo iya kukunika ukhetho lokucima upapasho, kule meko cinezela kuyo, kuba yile nto ufuna ukuyenza ukucima ipini.
Emva kwale nkqubo, Njengakwimeko yangaphambili Iya kukucela ukuba uqinisekise okanye uqinisekise umnqweno wakho wokucima i-pin ekhethiweyo, kule meko kuya kufuneka ukhethe enye indlela yokususa kwakhona.
Ezi zi iindlela zokususa izikhonkwane Zombini ezivela kwiwebhu kunye nohlobo lwesicelo.
1 Ungasusa njani izikhonkwane kwisicelo sefowuni esiphathwayo:
2 Ungasusa njani izikhonkwane kwisicelo seekhompyuter:
Uyithumela njani imiyalezo ngqo kwiPinterest?
Uyisusa njani ibhodi iphela kwiPinterest?